बैंक-वित्त :: OnlineKhabar.com - No. 1 News Portal from Nepal, Political News, Science, Social, Sport, Ecomony, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview
१० असोज, काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले कन्स्ट्रक्सन कर्जा र सुनचाँदी धितो कर्जामा कडाइ गरेको छ । दलालले विभिन्न ग्राहकको सुन जम्मा गरी बैंकबाट ऋण लिने तथा नियम मिचेर बनाइएका घरमा कर्जा दिंदा पछि...
नयाँ बसपार्कमा सिटी एक्सप्रेसको सहयोग
१० असोज, काठमाडौं । रेमिट्यान्स कम्पनी सिटी एक्सप्रेस मनि ट्रान्सफर प्रालिले दशैं-तिहारको अवसरमा यात्रुहरुको हितका लागि नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा विभिन्न सहयोग प्रदान गरेको छ । कम्पनीले नयाँ बसपार्क क्षेत्रमा प्रहरी हेल्प डेक्स, निशुल्क खानेपानी...
बेष्ट रेमिट र सेञ्चुरी बैंकबीच रेमिट्यान्स सम्झौता
असोज १०, काठमाडौं । बेष्ट रेमिट नेपाल प्रा.लि. र सेञ्चुरी कमर्सियल बैंक लिमिटेडबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । विहीवार बेष्ट रेमिटका प्रवन्ध निर्देशक श्याम तामाङ र सेञ्चुरी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत गणेश...
डलरको मूल्य १०० रुपैयाँ तल
१० असोज, काठमाडौं । अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य १०० रुपैयाँबाट तल झरेको छ । बिहीबार नेपालका वाणिज्य बैंकहरुले डलरको बिक्री मूल्य १०० रुपैयाँभन्दा १५/२० पैसा कम तय गरेका छन् । आज बिहान नेपाल...
१० अर्बको रिभर्स रिपोमा २१ अर्बको निवेदन
९ असोज, काठमाडौं । बैंकहरुमा अधिक तरलताको अवस्थामा कुनै सुधार नआएको संकेत देखिएको छ । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको तेस्रो रिभर्स रिपोमा आज बुधबार सबैभन्दा कम ब्याजदर कायम भएको छ । बजारको तरलता प्रशोचन...
९ असोज, काठमाडौं । भारतबाहेक तेस्रो मुलुक जाने नेपालीले बैंकबाट अनिवार्य पि्रपेड डेबिट कार्ड लिएर जानु पर्ने भएको छ । नेपाली बैंकको ट्राभल चेक सटहीको सेवा दिंदै आएको अमेरिकन कम्पनीले सो सेवा बन्द गरेपछि...
९ असोज, काठमाडौं । बेष्ट रेमिट नेपाल प्रा.लि. र जनता बैंक नेपाल लिमिटेडबीच रेमिट्यान्स भुक्तानी सम्बन्धी सम्झौता भएको छ । बुधबार बेष्ट रेमिटका प्रवन्ध निर्देशक श्याम तामाङ र जनता बैंकका चिफ अपरेटिङ अफिसर प्रमोद...
कामना बैंकले २१ प्रतिशत लाभांश दिने
९ असोज, काठमाडौं । कामना विकास बैंक लिमिटेडले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र ६ प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त निर्णय गरेको...
दसैंलाई नयाँ नोट वितरण सुरु
९ असोज, काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहकलाई उपलब्ध गराउन केन्द्रीय बैंकबाट नयाँ नोट लिन थालेका छन् । नेपालीहरुको महान र खर्चिलो पर्व दसैं आउन तीन हप्ता बाँकी रहँदा बैंकहरुले ग्राहकलाई नयाँ नोट...
रिलायबल फाइनान्सको सातौं शाखा कलंकीमा सुरु
८ असोज, काठमाण्डौ । रिलायबल फाइनान्स लिमिटेडको सातौं शाखा कलंकीमा विस्तार गरिएको छ । मंगलबार नेपाल वित्त कम्पनी संघका अध्यक्ष राजेन्द्रमान शाक्य तथा कम्पनीका अध्यक्ष राधेश्याम अग्रवालले शाखाको उदघाटन गर्नुभयो । २०६३ साल आश्विन...
अधिक तरलताले वित्तीय प्रणालीमा खतराको सम्भावना
९ असोज, काठमाडौं । बैंकिङ्ग क्षेत्रमा देखिएको अधिक तरलता व्यवस्थापनको सिलसिलामा नेपाल राष्ट्र बैंकले आज बुधबार १० अर्ब रुपैयाँको रिभर्स रिपो जारी गर्ने भएको छ । उक्त रिभर्स रिपोको परिपक्व म्याद सात दिन रहेको छ...
सेती फाइनान्सद्वारा लाभांशको प्रस्ताव
८ असोज, काठमाडौं । सेती फाइनान्सले गत आर्थिक वर्षको मुनाफाबाट सेयरधनीलाई १५ प्रतिशत बोनस सेयर र १० प्रतिशत नगद लाभांश दिने प्रस्ताव गरेको छ । फाइनान्स सञ्चालक समितिको बैठकले उक्त प्रस्ताव गरेको हो ।...